news2dago | Janoary 2009 | 3
[Ankapobeny ] 22 Janoary, 2009 10:34
Tambazo tsara Antananarivo
Dia iandrasana disadisa tokoa izay vao mijery ny vahoaka madinika!!! Efa impiry moa no nodradraina oe mijaly ny olona marary eny @ hopitaly ankehitriny. Ny vola ihany no antony vao mahazo fitsaboana @ antonony ireo marary. Tapa-kevitra ary izao ny fanjakana fa hanamboatra ny hopitaly Befelatanana sy ny HJRA. Mahavelombolo aloha ny maheno izany ka miandry ny tena asa ny vahoaka.
Efa antitra tokoa ireto hopitaly roa ireto ary fanambin'ny fanjakana moa ny hanao azy ho hopitaly manaram-penitra. Fehiny nisy nahatsara azy ihany izany ny hetsika nataon'ny mpanohitra satria nampihiratra ny mason'ny mpitondra ka nitodika aty @ vahoaka madinika.
Manolona ny fifanolanana misy eo @ Andry Rajoeilina sy Marc Ravalomanana dia mifanolana ho azy koa ny Viva sy ny Mbs. Ka nandefa vadin-tany eny Anosipatrana foibe toerana misy ny mbs izay ao @ tanin'ny kaominina ry zareo eo @ fiadidina ny kaominina ary nametraka taratasy fanairana momba ny faharavan'ny fifanekena. Mangoron'entana kosa arak'izany ny MBS raha tena voahaja ny lalàna. Mampanotany tena ihany anefa oe hanaiky an'izay ve lery?
"Tsapaho aloha ny hery vao mifanadrina amiko" hoy ny Filoha nampiasa ilay teny tsindrom-paingotra kely maharomotra ny mpanohatra sy ny mpanaraka ny TGV izay. Dia ho hita eo indray izay tenin'ny ankilany @ asabotsy. Ny hita aloha dia mihahenjana hatrany ny tady eo @ roa tonta.
(sary Madagascar tribune)
Mbola manjavozavo ihany ny resaka momba ilay tany namidy @ koreana sy ilay Force one ankehitriny raha ny fanazavana azo avy @ ireo tompon'andraikitra mivantana no resahana. Mazava tsara kosa anefa ny fanazavan'Ingahy Tovonanahary Rabetsitonta momba ireo satria dia mahasoa ny malagasy ny nanaovana izany hoy izy ary ny tombotsoam-bahoaka hatrany no katsahana hoy izy tao @ radio antsiva. Hita mihitsy aloha ny lehilahy oe malalatsaina kokoa ary matotra ara-politika kokoa no i Moxe Ramandimbilahatra. Mangataka ny elanelam-panahy FFKM moa ny lehilahy mba hisorohana @ mety hisin'ny korotana manolona izao disadisa misy izao.
Nomena ho an'ny FFKM kosa ny tany misy ny Romanor taloha etsy Ankorondrano mba hanorenana ny trano foibe iasan'ny FFKM.
Vaovao hafa kosa dia rava any @ 80% i Morondava raha nolalovan'ny rivodoza Fanele omaly. Mbola tsy dia misy vaovao heno laotra aloha manodidina an'io fahavoazana io hatreto fa samy mbola varina mamono ny afo efa narehatra teto Antananarivo daholo ny mpitondra.